पति राज पक्राउ परेसंगै शिल्पा शेट्टी पनि पक्राउ पर्दै, के लाग्यो उनलाई आरोप ? - Nepali in Australia
July 20, 2021 autherLeaveaComment on पति राज पक्राउ परेसंगै शिल्पा शेट्टी पनि पक्राउ पर्दै, के लाग्यो उनलाई आरोप ?
एजेन्सी । राजकुन्द्रा पक्राउ परेसंगै बलिउड अभिनेत्री तथा राजकी पत्नी शिल्पा पनि पक्राउ गर्ने भएकी छन् । उनलाई राजको सबै कारोवारको साझेदार भएको कारण पनि पक्राउ गर्न लागिएको हो । साथै उनीहरुले गत वर्ष सेरोगेसीवाट अपनाएको छोरीका कारण पनि उनलाई पक्राउ गर्न लागिएको भारतीय मिडियाले दावी गरेका छन् ।
सुनको व्यापार प्रवर्तन निदेशालयको अनुसन्धानको क्रममा रहेका राज राज कुन्द्रालाई पक्राउ गरिसकेपछि मुम्बई पुलिसले उनकी श्रीमती शिल्पा शेट्टीलाई सोधपुछको लागि पक्राउ गर्ने तयारी गरेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । शिल्पा शेट्टीले १४ बर्षदेखि फिल्मबाट टाढा भए पनि राज कुन्द्रासँगको उनको व्यापारिक साझेदारीका कारण नै उनी सम्पन्नशाली भएको आशंका छ ।
शिल्पा शेट्टीले आफ्नो आयलाई युट्यूब, इन्स्टाग्राम र अन्य सोशल मिडियामा आफ्नो उपस्थितिसँग जोडेकी छन् । उनीसँग एक दर्जन ब्राण्ड विज्ञापनहरू पनि छन्।
मुख्य अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीको अन्तिम फिल्म २००७ मा रिलीज भएको ुआपु थियो। १४ बर्ष पछि उनको अर्को फिल्म ुहंगामा २ु यस हप्ता रिलीज हुने छ। शिल्पा शेट्टी यद्यपि रियलिटी शोहरूमा धेरै सक्रिय छिन् र उनको आम्दानीको स्रोत टेलिभिजन बाहेक सोशल मिडियाको बारेमा पनि बताइएको छ।
मुम्बई पुलिसले सूचना पाएको छ कि शिल्पा शेट्टीको नाम पनि राज कुन्द्राको सबै व्यवसायिक सम्बन्धमा संलग्न छ। राज कुन्द्राको एपको प्रोमोसनल भिडियोमा शिल्पा शेट्टी पनि समावेश छन् । एप मार्फत विश्वका सबै अभिनेत्रीहरुका समाचार भिडियो प्रसारित गरिन्छ । उनी राज कुन्द्रासँग आईपीएल क्रिकेट टीम राजस्थान रॉयल्समा पनि सहभागी थिइन र शिल्पा शेट्टी पनि सतयुग गोल्ड नामको कम्पनीमा साझेदार हुन् ।
शिल्पा शेट्टीको पति राज कुन्द्रा पक्राउ पछि उनको पुरानो सोशल मिडिया पोष्टहरू फेरि चर्चामा छन् । भनिन्छ कि यी पुराना पोष्टहरू पनि मुम्बई प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानमा समावेश गरेको छ।
पुलिसले शिल्पा शेट्टीको पोष्टमा पनि अनुसन्धान गरेको छ । जुन उनले दोस्रो बच्चाको जन्म हुनुभन्दा ठीक अघि वा ठीक पछाडिका हुन् । कानूनका अनुसार सरोगेसी कुनै पनि क्लिनिकको प्रमोशनका लागि प्रयोग गर्न सकिदैन। कानुनी विज्ञहरू पनि भन्छन् कि जब उनको जिवनमा एक स्वस्थ बच्चा छ भने सरोगेसी मार्फत अर्को बच्चा जन्माउनु पनि कानुन विपरित हो ।